Warbixin:Waxa ka tagi doona Sucuudiga ku dhawaad 670 kun oo shaqaale shisheeya ah 2020 - Horn Future
Warbixin:Waxa ka tagi doona Sucuudiga ku dhawaad 670 kun oo shaqaale shisheeya ah 2020
Riyadh(Horn Future)-Warbixin la soo saaray ayaa ku qiyaasay tirada shaqaalaha shisheeye ee ka tagi doonta boqortooyada Sucuudiga ku dhawaad 670 kun ilaa sanadka 2020,iyada oo tallaabadani ay kusoo beegmayso bixinta kharashka cashuurta lagu soo rogay dadka weheliya shaqaalahan bil kasta.
Sida ku cad warbixintan oo uu soo saaray baanka Sucuugiga-Fransiiska ee loo soo gaabiyo (BSF), in heerka tirada shaqaalaha shisheeye ee ka tagi doona boqortooyadan ay tahay qiyaas ahaan 165 kun oo shaqaale ah sanad walba,waxana cashuurta kharashka lagu soo rogay dadka weheliya shaqaalahan lagu qiyaasay hantida kasoo xeroonaysa ilaa (SR 20 billion) milyaar oo riyaal Sucuudi ah.
Tirada dadka shisheeye ee ku nool dhulka barakaysan ee uu ka taliyo qoyska Sucuudigu ayaa lagu qiyaasay ku dhawaad 11.7 malyuun oo 7.3 malyuun oo ka mid ah ay shaqeeyaan halka 4.3 malyuun ay yihiin dadka weheliya oo ka kooban 1.1 malyuun oo qoysas ah.
Maamulka qoyska Sacuudiga ayaa bilaabay bilowgii bishan July inuu dhaqan galiyay inuu kusoo roggo cashuur dadka weheliya shaqaalaha shisheeyaha ah ee isku gu jira lab iyo dhidig.
Tallaabadan qoyskani ku dhaqaaqay fulinteeda ayaa waxa ay ka dambeeysay hoos u dhaca aad u ba’an oo haleelay miisaaniyadda qoyskan oo ay sabab u tahay ku tagrifalka xad-dhaafka ah ee qoyskani ee hantida marka lagu daro hoos u dhaca ku yimiday qiimaha shidaalka ee dunida ee dakhliga xad-dhaafka ah uu ka helo qoysakni.
Dadka shaqaalaha ee shisheeye ayaa waxa dhulka barakaysan ee qoyskani maamulo ugu nool yihiin qaab adoonsi gaar ahaan dadka ka yimaada waxa loogu yeedho dunida sadexaad oo ay kamid yihiin Somaalidu iyada oo loo gaysto xadgudubyo ba’an oo ka baxsan bixni’aadantinimada oo marar qaar gaadha ilaa heer dhimasho.
Waxa dhamaan qof kasta oo weheliya shaqaalahan lagu soo roggi doonaa inay bixiyaan lacagta cashuurta cusboonaysiinta aqoonsiga degganaansha ah taas oo ah (SR 100) riyaal ka Sucuuiga bil kasta, lacagtaas sannad walba noqon doonta( SR 1200) oo riyaal Sucuudi ah.
Waxa cashuurta lacagtani ay laba laabmi doontaa bisha July 2018 ilaa ay gaadho bisha July 2020 (SR 400) riyaal Sucuudi ah bil kasta waxana guud ahaan ay noqon doontaa sanadkiiba (SR 4,800) oo riyal Sucuudi ah.
« Maydadka tobonaan qaxooti ah oo Masaari ah oo laga helay deegaano lama-degaanka dalka Libya	» Kuuriyada Waqooyi:Tababarka ciidan ee Marakanku waxay ku riixayan dagaal nuclear ah